बार्सिलोनाद्वारा रेफ्रीको आलोचना | Hamro Khelkud
एजेन्सी – ला लिगाको नयाँ सिजनमा बार्सिलोनाले शनिबार पाँचौं खेल खेलेको थियो । तर सिजनको छोटो समयमा बार्सिलोनाले रेफ्रीको भुमिकालाई लिएर प्रश्न खडा गरेको छ ।
बार्सिलोनाका प्रशिक्षक रोनाल्ड कोम्यानदेखि टोलीका खेलाडीले समेत शनिबार रियल म्याड्रिडसँगको एल क्लासिका दिइएको पेनाल्टीका विषयमा रेफ्रीको आलोचना गरेका थिए । क्लेमेन्ट लेन्गलेटको फाउलमा रेफ्रीले रियललाई पेनाल्टी दिएका थिए ।
पेनाल्टी बक्समा रियलका कप्तान सर्जियो रामोसको टि सर्ट तानेर फाउल गरेपछि रेफ्रीले पेनाल्टी दिएका थिए । खेलका दौरान भने रेफ्री जुवान मार्टिनेज मुन्यइरा पेनाल्टी दिएका थिएनन् । घटनालाई मैदानमा छेउमा रहेको मोनिटरमा हेरेपछि रेफ्रीले पुरानो निर्णय बदल्दै पेनाल्टी दिने निर्णय लिए । विवादको कारण त्यहि रह्यो ।
खेल १–१ को बराबरीको अवस्थामा रहेको खेलमा प्राप्त पेनाल्टीलाई रामोसले गोलमा परिणत गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए । पेनाल्टीको त्यो निर्णयमा बार्सिलोना खेमामा भने चर्को असन्तोष देखिएको थियो । मैदान बाहिर वा भित्र रेफ्रको भुमिका आलोचनामा पर्यो । खेलपछिको पत्रकार सम्मेलनमा पनि रेफ्रीको आलोचनाले निरन्तरता पाएको थियो ।
‘मैले रेफ्रीलाई पनि भने । भिएआरले स्पेनमा कसरी काम गर्छ आशा गरौं कसैले मलाई त्यसको बारेमा जानकारी दिनेछ,’ कोम्यानले भने, ‘हामीले ५ खेल खेल्यौं । भिएआर बार्सिलोनाका विरुद्ध मात्र आएको छ । पक्षमा कहिल्यै छैन ।’
कोम्यान त्यतिमा रोकिएनन्, ‘सेभिल्लाविरुद्धको खेलमा लोओनल मेस्सीसँगको फाउल पेनाल्टी थिएन ? वा गेटाफेविरुद्ध २ रेड कार्ड थिएन ? बार्सिलोनाकाविरुद्ध मात्र किन भिएआर भनेर मैले उनलाई सोधे । त्यो पेनाल्टी नै खेलको निर्णायक क्षण रह्यो ।’
बार्सिलोनाका सर्जियो बुस्क्वेटले पनि रेफ्रीको भुमिकाको आलोचना गरे । ‘धेरै खेलमा पेनाल्टीकै कारण फरक परेका हुन्छन् । एउटा रियल बेट्सिविरुद्धको खेल स्पष्ट दिमागमा आउँछ,’ उनले भने, ‘उनीहरु भन्दा निष्पक्ष खेल खेलाइएको छ र सबैले त्यो निर्णय मान्नुपर्छ । तर मलाई लाग्छ उनीहरुलाई आज हामीलाई धेरै सजाय दिए ।’
क्याटलान सन्चारमाध्यमले पनि रेफ्रीको आलोचना गर्दै शीर्षक राखेका छन् । ‘भिएआरले बार्सिलोनाबाट क्लासिको खोस्यो ।’ ‘ क्याप नोउमा बार्सिलोनाविरुद्ध विवादस्पद जिते,’ मुन्डो डिपोर्टिभोले लेखेको छ ।
बार्सिलोनाले सिजनको सुरुवात सन्तोषजनक गर्न सकेको छैन । ला लिगाका पछिल्ला ३ खेलमा टोली जित विहिन छ । पछिल्ला प्रदर्शनमा टोलीमा सकारात्मक पक्ष देखिएको छैन । ला लिगाका ५ खेल सकिदा टोलीले ७ अंक मात्र जोडेको छ । बार्सिलोना अंक तालिकाको १२ औं स्थानमा छ । एक खेल बढी खेलेको साविक विजेता रियलको भन्दा बार्सिलोनाको ६ अंक कम छ ।